Arụmụka: ndị ohu ahụ tọhapụrụ onwe ha, na-echeghị ndị kpochapụrụ ya ... Ndị Africa nọ n'ohu na America wulitere ikike ha ... "Nke a bụ ihe ọkọ akụkọ ihe mere eme Genevan Aline na-ekpughe" | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: August 19, 2017 00: 20 Enweghị asịsa
"Arụmụka ahụ ghe oghe."
Otu nnukwu akụkụ nke ndị ojii nke America n'oge ịgba ohu abụghị ohu: ọ bụ n'efu n'ihi na ọ tọhapụrụ onwe ya ... Nke a bụ ihe ịtụnanya nke eserese nke Genevan sere Aline na-enyefe ndị ohu ọzọ! Site n'inupụrụ isi nnupụisi, akụkọ ihe omimi nke nnwere onwe (1492-1838), ọrụ mbụ iji mee ka a mara ihe gbasara okwu ahụ na ntanetị zuru ụwa ọnụ.
- Oge: Ndị ohu, ị dee, nwere onwe gị n'ụzọ atọ. Mgbapu, ịmalite ...
- Aline Helg: Nke a bụ usoro ezi uche dị na ya: anyị na-agbanahụ ọnọdụ a na-apụghị izere ezere ...
N'ime narị afọ abụọ mbụ nke ịchịchị, a pụrụ ime atụmatụ na 10% nke ndị ohu na-achịkwa. Na mba ndị na-adịghị achịkwa, ndị ohu a na-agba ọsọ - a na-akpọ "chestnuts" - soro ndị ọzọ na-agba ọsọ na ndị Indians.
Ụfọdụ obodo ndị dị na Maroon dị ezigbo mkpa na na njedebe nke iri na asaa na mmalite narị afọ nke iri na asatọ, ndị ọchịchị na ndị Spain na-edebanye nkwekọrịta na ha, na-achọpụta na nnwere onwe ha nyere ha anaghị anabata ọhụụ ọhụrụ ha enyere ndi ochichi ndi agha agha mgbe achoro ... otutu n'ime obodo ndia ka di kwa taa, ma nwekwa ikike ndi puru iche.
Enwere ezigbo ihe atụ nke San Basilio de Palenque na Colombia, ndị ọzọ nọ na Suriname. Ọ bụ ihe nwute, dị ka ọ dị n'ihe banyere ndị India lanahụrụ oghere agbụrụ, ala ha na-enweta ugbu a na nnukwu ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ.
- Ọtụtụ ndị ohu na-agwa ha enfranchisement ...
Nke a bụ ihe a kacha mara amara: mgbapụta nke nnwere onwe onwe onye. Nke a nwere ike ịbụ iwu ndị Rom, a gụnyere ya na iwu Iberia nke narị afọ nke iri na otu na nke iri na abụọ wee gaa America na mpaghara Spanish na Portuguese.
E nwere iwu a kapịrị ọnụ: ego a ga-akwụghachi nna ya ukwu agaghị adị elu karịa ọnụahịa ịzụta; enwere ike iji mgbapụta gbapụta nnwere onwe ya; ohu nwere ike ịgbapụta nnwere onwe nke ndị ọzọ, ọ na-abụkarị nwa ya ... Ihe ndị a niile ka etolitere n'obodo ndị Hispano-Portuguese, ruo na njedebe nke ịgba ohu, na 1886-1888. Na mpaghara French, Bekee na Dutch, enwere ike ịdị na mbido, mana ka usoro ịgha mkpụrụ na-etolite, a na-ewepụ ya. N'ozuzu, enwere ike ịkọ na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị ohu nke obodo Hispano-Portuguese nwere ike ịzụta nnwere onwe ha. O doro anya na ụmụ ha kwa nwere onwe ha.
- Ndị ohu na onwe ha bụ ukwuu n'ime ụmụ nwanyị ...
- Akwukwo ihe omuma aghotawo ihe omuma a site n'ikwu na ha bu ndi iko ndi oji. N'ezie, nnyocha nke akwụkwọ ndekọ na-egosi na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ohu gbapụtara onwe ha nnwere onwe. Olee otú?
Mụ nwanyị dị ọtụtụ karịa ụmụ nwoke n'obodo, ebe enwere ikikere iji aka ha rụọ ọrụ na Sọnde na ezumike; ha ji nke nta nke nta chịkọtara akwu akwa site na ịsacha uwe ma ọ bụ ree na ahịa ... N'aka nke ọzọ, enwere ụzọ ịtọhapụ onwe ya maka ndị mmadụ, bụ nke gụnyere ndị agha, dị ka n'oge agha. na mmalite nke ịchịcha. Enwere ndị ohu ojii na ndị meriri emeri, onye na - aghọ onye nnabata mgbe ụfọdụ: ha nwetara na obodo onyinye nke ndị India, ndị ha na - eduzi na ha na - erigbu ya.
Nke a nwere ike ịmalite n'oge agha nke nnwere onwe, mgbe ndị agha ahụ ka na-enweghị ndị ikom ruru eru.
- E nwere n'ikpeazụ revolts ...
- M kọwapụtara ndị a dị ka ndị na-eme mkpọtụ na-agbakọta ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu ohu ohu e nyere, na nke ime ihe ike.
Nnupụisi ahụ dị nnọọ ole na ole, megidere ihe anyị kweere. Nke mbụ bụ nke Berbice (n'etiti deltas nke Musicoco na Amazon) na 1763. E nwere, n'ezie, na nke Santo Domingo si 1791, nke mere ka ntọhapụ nke ndị ohu na n'àgwàetiti (400 000, na mbata), e meriri ndị agha Napoleon na mkpọsa nke ndị Republic nke Haiti site na ndị ohu mbụ: nke a bụ oké mgbanwe, ogologo eleghara anya, akụkọ ihe mere eme nke Amerika ...
Nnukwu nnupụisi atọ ikpeazụ a na-eme na English West Indies ka abolitionism malitere ịmalite ike n'England; ha na-ebido mkparịta ụka na nkwado nkwado na abolitionism, nke ha na-enyere aka ime.
Olee ebe nghọtahie na nnupụisi ga-abụ mgbe niile?
- Okwu nke nnupụisi ohu ahụ dị ugbu a n'akwụkwọ ndị e dere n'America n'oge afọ 80: oge ​​nke ọhụụ nke heroism na ọdịdị nke agha ahụ ...
Nsogbu bụ na ọmụmụ ihe a weere akwụkwọ ikpe maka ego, na-agụ dị ka nnupụisi nke ihe ndị ohu na-emeghị karịa iche na ikwu banyere nnupụisi. Otú ọ dị, maka iwu ndị dị ike, iji tụlee igbu nwoke ọcha bụ ihe siri ike nke na-egbu ya n'ezie, a na-agbaghakwa nkwupụta ahụ mgbe nile site na mmekpa ahụ.
Na British West Indies, ndị agha nọ na-ejide ha n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe ha na-eche ihu ibe ha; Ọ bụrụ na ha kwuru n'oge ha na-ata ahụhụ mgbe ha na-akpọ aha ndị ohu ndị ọzọ, a na-ewere ha dị ka accomplices ma nagide ụdị ahụhụ ahụ ... O doro anya na ohu ahụ na-enupụ isi bụ ihe ọhụụ na mmụọ nke ndị colonist, ndị na-egosi na 1537 na Mexico City ma gafee mpaghara dum. Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya: n'elu oge na ókèala nke America, mmadụ anọ ọzọ na-ebupụ ndị Afrịka karịa ndị si mba ọcha. Umu bu ndi di ntakiri, ha na egwu mgbe nile.
- Ndị ohu, ị na-edetu, gbanwero atụmatụ ha dịka mgbanwe si ọnọdụ ụwa na ezughị okè na usoro ọchịchị. Kedu ka ha si mee ka a gwa ha?
- Simple: dị ka nna ha ukwu were ha maka ndi-nzuzu, ha ẹkenịmde ha mkparịta ụka na ọnụnọ nke ndị ohu ... Kere planters izute na Gọvanọ na-aṅụ sịga sịga, ha ịkatọ mkpebi nke eze na-achọpụta na e enweghị ndị agha n'ihi agha dị n'etiti France na England; ndị ohu na-eje ozi na cognac ma gee ntị; ụfọdụ ndị nwere ike ịgụ na ga-elele akụkọ na akwụkwọ akụkọ ...
Akụkụ ọzọ a na-amaghị ama bụ okwu ndị ohu kwuru iji gbachitere nnwere onwe ha. Enwere akwụkwọ n'ụlọ ikpe dị na Iberian na ngwụsị narị afọ nke iri na asatọ ebe ndị ohu na-ezo aka na nkà ihe ọmụma nke ikike ndị sitere n'okike: Chineke kere ụmụ nwoke niile hà ... N'obodo ndị Protestant, ebe ozisa ozi ọma gụnyere ịgụ Akwụkwọ Nsọ. Ndị ohu ga-eji akụkọ banyere ịbụ ohu nke ndị Hibru na Egypt na nnwere onwe ha iji wuo ụdị nkà mmụta okpukpe nnwere onwe tupu oge ahụ. Ha dabere na Bible ịsị: Ọ bụ naanị na Chineke chọrọ ya, ma onyenwe anyị kwesịrị irubere ya isi ...
- Gịnị ka ihe a nile na-ekwu banyere ịbụ ndị ohu?
- Nke mbụ, ọ na - ekwu owu ọmụma ha nọ. Abolitionism na-amalite na 1760 afọ. Ruo oge ahụ, ndị ohu nọ naanị na obodo ndị na-adịghịdị amata ha dị ka ndị mmadụ: ha bụ "ihe ngwongwo na-ebugharị" dịka iwu ahụ si dị.
Na ọnọdụ ndị a, ịnwe ọrụ nke ndụ nke na-agụnye nnwere onwe onwe ya na-egosi ike, nkwụsi ike pụrụ iche, echiche nke onwe ya nke dị ebube. Anyị dị anya site n'onyinyo ahụ, bụ nke a na-ese ogologo oge, nke ohu ahụ kpamkpam, n'enweghị enyemaka ọ bụla iji pụọ na ya. N'ụzọ dị iche, ndị ohu bụ ndị na-eme ihe nkiri n'akụkọ ihe mere eme ha; n'agbanyeghị ọnọdụ ha, ha chọrọ itinye aka na ndụ ha.
- Nke a bụ otu "E si jiri akọ na-ewu America ọzọ", dịka usoro gị si dị. Kedu ihe ụwa nke "enweghi agba" dị?
- Ọ bụ ụwa nke ndị ọrụ obodo, ndị inyom obodo, ndị isi ezinụlọ. Ọ bụkwa obodo ime obodo nke llaneros - ndị na-eme njem na mbara igwe - na ndị nkịtị.
Ụwa nke a ga-eme ka ọ gharazie ịdị na-adaba mgbe ọchịchị colonial nweta nnwere onwe, mgbe ahụ "a kpagburu" na njedebe nke narị afọ nke 19. A ga-enwe nnukwu ọbịbịa: ọ bụ ịgba ohu kagburu na "ịkpa ókè" sayensị na-ewepu.
Banyere ndị wepụrụ iwu ahụ, ha kagburu ịgba ohu site na imechi ndị isi, mana ha tụfuru ndị ohu ochie ahụ mgbe obere oge gachara. Worldwa a na-ata ahụhụ nke ukwuu na ngwụsị nke iri-iteghete na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
N'oge mmepe nke mba-ala na ndị na-ebupụ mba, ọ na-esiri ike ịchọta ọnọdụ ya na mba ahụ. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị "enweghị ụcha" na-anọchi anya ọtụtụ ndị ... Taa, a nabatara onyinye ọdịbendị na nkà na ụzụ nke ndị ohu iji guzobe na mmepe nke America: ọ dịghị mba nke America nwere ike ịkọwa ya n'ekwughị oke onyinye ndị a. Ndị a bụ ihe kachasị njọ dị ka ndị ohu na-emepụta ha n'ime obere mkparịta ụka ndị fọdụrụnụ na ndụ ha.
Aline Helg, "O nweghikwa ohu! Site n'inupụrụ isi nnupụisi, nnukwu akụkọ banyere nnwere onwe (1492-1838) "(The Discovery)
Ọkt20 02: 19